Fitakian’ireo mpianatra mpitsabo :: Efa vita ny fombafomba amin’ny fandoavana ny tambin-karama • AoRaha
Fitakian’ireo mpianatra mpitsabo Efa vita ny fombafomba amin’ny fandoavana ny tambin-karama
Tsy tokony hisy ny olana saingy mihisitra ny fivoahan’ny vola. Io no azo andikana ny fanazavana avy amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka manoloana ny fitakian’ireo mpianatra mpitsabo na “interne des hopitaux” afak’omaly.
Efa vita avokoa ny fikarakarana an’ireo fomba­fomba amin’ny fandoavana ny tambin-karaman’izy ireo, raha ny filazan’ny loharanom-baovao iray avy ao amin’io minisitera io. Tetsy an-daniny, nizara ny hevitr’ ireo mpianatra ho mpitsabo satria nisy tokoa ireo nampiato ny asany teny anivon’ireo tobim-pahasalamana sy hopitaly, raha tao indray ireo nanohy ny asany toy ny mahazatra.
Araka ny nambaran’ny mpitarika ny Fikambanan’ny mpitsabo “Interne” na AIM kosa anefa dia tokony efa nanaja an’io andro tsy tokony niasana io avokoa ny mpiana­tra rehetra. Anisan’ny fitakian’ ireto mpianatra “interne” ireto , ankoatra ny fandoavana ny tambin-karama ho an’ny volana mey sy jona, ny tokony hananan’izy ireo fandaharam-potoana raikitra amin’ny fandoavana izany.
Fotoam-pahavaratra Tsy mampiraika ny mponina eny amin’ ny faritra iva ny fiakaran’ny rano
Fanadihadiana isan-tokantrano Mbola andrasana ny vokatra tena ofisialin’ny fanisam-bahoaka
Fanorenana tsy ara-dalàna
Fanadiovana ny tanana :: Sahirana amin’ny fitantanana ny fako ireo fokontany sy kaominina